Sanduuqi Madoobaa Ee Diyaaraddii Dhacday Itoobiya Oo Lagu Soo Baadhayo Dalka Faransiiska | Himilo Media Group
Sanduuqi Madoobaa Ee Diyaaraddii Dhacday Itoobiya Oo Lagu Soo Baadhayo Dalka Faransiiska
Addis Ababa, (Himilo)-Sanduuqa Madoow ee duuba xogta diyaaradaha ee ku jiray diyaaradii dhacday ee Boeing 737 Max 8 ee ay laheyd shirkadda diyaaradaha ee dalka Itoobiya ee burburtay ayaa si loo ogaado xogta sanduuqan ku jirta waxa loo diray dalka Faransiiska.
Sanduuqa madow (Black Box) waxa loogu tala galay diyaarad kasta duullimaadka ay sameyneyso inuu duubo, wuxuuna sidoo kale uu xafidiyaa dhammaan xogta la xidhiidha qaybaha diyaaradda iyo sida ay u shaqeeyaan, wuxuuna sanduuqu awood u leeyahay inuu mudda dheer uu hayo xogta uu mar duubo.
Wuxuuna sanduuqu awood u leeyahay 25 saacadood oo xidhiidh ah inuu xogta diyaaradda uu duubo isla-markaana uu keydiyo.
Wuxuuna ka kooban yahay laba qaybood qaybta codadka keli ah duubto oo ku taallo qolka ay duuliyeyaashu fadhiistaan halka qaybta xogta kale ee qaybaha diyaaradda duubtana ay ku taallo qaybta ugu dambeysa diyaaradda, taasoo loogu tala galay haddii uu shil dhaco iney sanduuqa waxba soo gaadhin.
Diyaarad kasta oo burburta in ahmiyadda koowaad la siiyo sidii sanduuqaasi madow loo heli lahaa ayaa waxa ugu wacan waa xogta la isku halleyn karo oo sanduuqaasi ku duuban.
Sanduuqi Madoobaa ee diyaaraddii Burburtay Miisaankiisa waxa lagu qiyaasaa inuu ku dhaw yahay miisaanka beytariyada gawaadhida ee dhexe ama in aanu wax badan ka cusleyn.
Sanduuqa in dhakhso la helana waxa gacan ka geysta raadaar ku xidhan oo dadka baadi goobaya sanduuqa u sheegaya halka uu ku jiro.
Itoobiya maxay dalkeeda ugu baadhi weyday sanduuqa?
Sanduuqa xogta ku duuban in la akhriyo ama laga soo saaro waxay u baahan tahay aqoon iyo teknooloojiyad casri ah marka shirkadaha diyaaradaha caalamka intooda badanna awood uma laha iney baadhaan.
Sidaa darteed waddanka kale ee ay isleeyihiin waa lagu baadhi karaa ayaa loo diraa. Itoobiyana maadaama aanay awood u lahayn iney sanduuqa baadho aqoonta shirkadduna heerkaa gaadhsiisneyn waxay caawimaad ku saabsan sanduuqa xogtiisa in loo soo baadho ay u xil saaratay dalka Faransiiska?
Diyaaradda Boeing 737 MAX 8 oo ay laheyd shirkadda diyaaradaha ee Itoobiya oo dhawaan ku burburtay gudaha dalkaasi waxa ku dhintay dhammaan 157-dii qof ee saarneyd.